Imikhuba Engcono Kakhulu Yokumaketha nge-imeyili
Ibhuku Lokuzikhandla Elithuthukisiwe Nge-imeyili
NgoLwesibili, ngo-Mashi 15, i-2011 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
I-MarketingSherpa, kanye ne Ukuthengisa kwe-ClickMail, uhlanganise ndawonye incwadi eyodwa ku-Email Marketing Advanced Practices!
Abathengisi be-imeyili banamuhla babhekene nezinselelo ezinkulu ekuxhumaneni nezithameli zabo. Phakathi kokuhlukanisa umkhiqizo wakho nomncintiswano, ukuletha imikhondo efanelekile nokwenyuka kwemali eku-inthanethi, kungaba nzima ukuthola ukuthi isikhathi sakho esibalulekile nezinsizakusebenza kufanele zisetshenziswe kuphi, ingasaphathwa eyokwakha isu lokuthengisa le-imeyili elizoba nomthelela empumelelweni ephelele ye inhlangano yakho.
Njenge Martech Zone obhalisile, oda ngomhlaka 25 Mashi bese uthola i- $ 100 isaphulelo ngokukhethekile kokuqalisa ngaphambilini! Funda kabanzi ngencwajana enikezela ngeminyaka engu-7 yezinqubo ezifakazelwe zokusebenza kokumaketha kwe-imeyili!
Uma ubulokhu ulandela ibhulogi yami isikhashana, uyakwazi lokho Semrush ithuluzi lami eliyisihluthulelo engilithandayo - linamandla amangalisayo wokuhlonza amagama asemqoka, ukwenza ucwaningo lokuncintisana nokukhomba amakhasi osezingeni ongawazi. Bheka a umbiko oyisampula - Izinto ezinhle! Abantu bokuqala aba-5 abaphendula kule imeyili bazothola i-akhawunti yamahhala!
Ukubuyisela isayithi le-WordPress elibi
I-Marketing Idea: Ukubhaliswa Komcimbi Ochofoza okukodwa